Ukuqhathanisa phakathi kwezindlela ezi-3 ezahlukahlukene zokutadisha - Ukuqeqeshwa Komqondo
Ulapha: Ikhaya » Izihloko » Indlela yokutadisha » Qhathanisa izindlela ezi-3 ezahlukahlukene ocwaningweni
Ekhasini lethu sikhulume kaningana ngezindlela ezahlukahlukene zokufunda; saqopha imithetho eyishumi yokufunda okuhle (kepha nalabo isifundo esibi), wenze ukuqhathanisa phakathi ukubukeza okuphindaphindiwe nokwakhiwa kwamamephu emiqondo, ifakwe kuhlu inombolo amasu wokuqonda umbhalo futhi siqhathanisa izindlela ezahlukahlukene zokufunda ku-dyslexia.
Lesi sikhathi, esikhundleni salokho, sikhuluma ngezindlela zokufunda kubafundi baseyunivesithi futhi sikwenza ngokungenisa ucwaningo lwakamuva, ngombono wethu, othakazelisa kakhulu.
Iqembu labaphenyi eHolland uthathe isinqumo sokuqhathanisa izindlela ezintathu ezihlukene zesikhathi eside zokufunda: ukudala imibuzo kuma-slides azofundwa ngumfundi, impendulo yemibuzo kuchazwe ngaphambilini kuma-slides ngesikhathi sokufunda, kanye wokubuyekeza.
Ukuhlola imiphumela yalezi zindlela ezi-3, abacwaningi bahlukanise iqembu labafundi abangama-88 basenyuvesi laba amaqenjana ama-3, ngalinye lathola indlela eyodwa kwezi-3 ezisetshenzisiwe zokufunda.
Ngemuva kwesonto, abafundi beza ihlolwe ngokumangala qhathanisa nalokho okufundwe esifundweni. Ukuhlolwa kwamboza bobabiliimiqondo yokufunda ethula ku-slides okufanele kufundwe (ukufundwa kweqiniso) kanye amandla okusebenzisa le miqondo (ukudlulisa ulwazi).
Uma kuqhathaniswa nemodi yokufunda esekelwe kuphela ekubuyekezweni kwemibono efundwe, indlela egxile kuyo isizukulwane semibuzo ngumfundi nalowo agxile kuwo Phendula imibuzo echazwe ngaphambilini kufakwe a ukufunda okwengeziwe imiqondo ekhona kuma-slide afundwayo. Ngetulu kwaloko, lemicondvo beyentiwa ihlanganiswe kalula letinye timo (kudlulisa lwati).
Kubukeka sengathi ukungqubuzana okusebenzayo ocwaningweni kuholela ukufunda okusheshayo nokuhlala njalo ngokuqhathaniswa nendlela esekwe ekufundeni okuphindaphindiwe okulula (konke okuvame kakhulu). Ikakhulu, lokhu bekuzokwenzeka uma indlela leyo ibisuselwa ekuhlolweni kokuhlolwa okuqhubekayo kwalokho okufundile.
Ngaphezu kwalokho, lokhu kuguqulwa kungabonakala kungaholela ekuqondeni okujulile kwemiqondo, enziwa icaciswe ngekhono elingcono lokuyihlanganisa futhi ezimeni nasezimweni ezihlukile kune; ngakho-ke bekungeke kube yikhono lokukhumbula kuphela.
U-Ebersbach, M., Feierabend, M., & Barzagar Nazari, K. Ukuqhathanisa imiphumela yokwenziwa kwemibuzo, ukuhlolwa, nokubuyiselwa ekukhumbuleni kwesikhathi eside kwabafundi ekufundeni kwaseyunivesithi. Kusetshenziswe i-Cognitive Psychology.
indlela yokutadisha, indlela yokutadisha
Qhathanisa izindlela ezi-3 ezahlukahlukene ocwaningweni2020-02-122020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/02/confronto-fra-3-diversi-approcci-allo-studio.jpg200px200px
Ukuqeqeshwa kokusebenza kwememori nokuqeqeshwa metacognitiveImibhalo, imisebenzi ephezulu, inkumbulo yokusebenza
Ukudunyiswa okungaphezulu kokuhlambalaza: isu lokuwina lokuthuthukisa indlela yokuziphatha kwezingane?Ukuziphatha